News18 Nepal || नेपालमा बाढी पहिरोको कहर : पछिल्लो २४ घण्टामा कहाँ कति क्षति ? - News18 Nepal
काठमाडौं । गए रातिबाट परेको भिषण वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न जिल्लामा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति पुर्‍याएको जनाएको हो ।
गृहका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका ५ जम्बुस्थित याल्मु खोलामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीबाट दुई जनाको ज्यान गएको छ । उक्त बाढीले १४ वटा घर बगाउँदा १६ जना बेपत्ता र चार जना घाइते भएको जनाएको छ ।
यसैगरी बाह्रबिसे नगरपालिका-३ खागदलस्थित अरनिको राजमार्गमा रहेको ठाडो खागदल खोलामा आएको बाढीले पक्की पुलसहित ११ वटा घर, एउटा ग्यारेज, एउटा स्कोर्पियो गाडी, पानी बोक्ने एउटा ट्यांकर, सडक विभागको अलकत्रा बोक्ने ट्रक एउटा र एउटा बससमेत बगाएको छ ।
भोटेकोशी गाउँपालिका ५ बुलकुटे झ्यालेस्थित बुलकुटे खोलाको बाढीले बगाउँदा चार जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त स्थानमा आएको बाढीबाट दुई जना घाइते भएको र दुई वटा घर बगाएको जनाएको छ । कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका १८ भगतपुरको सुकुम्बासी बस्तीमा बाढी पस्दा तीन सय घरधुरी डुबानमा परेका छन् ।
उक्त बाढीका कारण ६० वटा घर भत्किएर बस्न नमिल्ने भएको बताइएको छ । त्यहाँका १२० जना स्थानीयलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको भवनमा राखिएको जानकारी दिएको छ । यसैगरी लम्जुङको बेसीशहर नगरपालिका ६ खरखरे भिर र सहजी खोलामा राति परेको अविरल वर्षाको कारण पानीको बहाव बढ्न गई बाटो भत्किँदा पूर्णरूपमा अवरूद्ध भएको छ ।
नेपालको नयाँ नक्सा गुगलमा कहिले देखि देखिएला ?
भारतबाट आएका हजारौं नेपाली सिधै घर जाँदै